Axad 19 Bisha Sagaalaad 2021
Dib-U-Habeynta Shirkaddu Awoodda astaantu waxay ku eg tahay oo keliya kartideeda iyo aragga, laakiin sidoo kale isgaarsiinta. Buug-yaraha fududahay in la adeegsado oo laga buuxiyo sawir gacmeed xoog leh; websaydh ku jihaysan oo rafcaan ka qaata macaamiisha kaas oo bixiya adeegyo khadka tooska ah iyo dulmar guud ah alaabada sumadaha. Waxaan sidoo kale horumarinay luuqad muuqaal ah oo mataleysa dareenka astaanta leh qaab muuqaal ah oo sawir iyo sawir isgaarsiineed cusub ee warbaahinta bulshada, sameynta wadahadal u dhexeeya shirkadda iyo macaamilka.
Nashqadeynta Nooca Loo Yaqaan 'typeface Design'
Nashqadeynta Nooca Loo Yaqaan 'typeface Design' Monk wuxuu raadiyaa isu-dheellitirnaanta furfurnaanta iyo karti-u-yeelashada shaqsiyaadka ku xeel-dheer arrimaha bani'aadamka iyo dabeecad aad u badan oo la habeeyay oo loo yaqaan 'Sans sans'. In kasta oo markii hore loogu talagalay qaabeynta nooca loo yaqaan 'Latin ụdị' waxaa goor hore la go'aansaday in loo baahan yahay wada hadal ballaaran si loogu daro nooc Carabi ah. Labada Latin iyo Carabi labaduba waxay noo qaabeeyaan fikir isku mid ah iyo fikrada joomatari wadaag ah. Awoodda hannaanka isbarbar-dhigga ee isbarbar socda ayaa u oggolaanaya labada afba inay yeeshaan isku-dheellitirnaan iyo nimco. Luuqada Carabiga iyo Latinku labadaba si isdaba joog ah ayey u wada shaqeeyaan iyagoo leh tiro wadaago, dhumuc jirrid, iyo qaabab qaloocsan.
Jimco 17 Bisha Sagaalaad 2021
Laambada Hawsha Pluto wuxuu xooga saarayaa inuu diiradda saaro qaabkiisa. Kombuyuutarkeeda, dhululubo firfircoon waxaa ku xardhan gacanta xarrago leh oo kuxiran sagxad-weji goobeed, taasoo sahlaysa in la dhigo nalkeeda jilicsan-laakiin diiradda saaraya leh saxnaan. Qaabkeeda ayaa waxaa waxyooday by telescopes, laakiin taa bedelkeeda, waxay raadineysaa inay diirada saarto dhulka halkii ay ka heli lahayd xiddigaha. Waxaa lagu sameeyay daabacaad 3d iyadoo la adeegsanayo balaastiigyada hadhuudhka ku saleysan, waa wax aan caadi ahayn, oo aan ahayn oo keliya isticmaalka 3d daabacayaasha moodada warshadaha, laakiin sidoo kale eco-saaxiibtinimo.
Baakada Naqshadaynta baakadaynta taxanaha Cunnada Badda ee Guusha waa inay muujisaa midabnimada iyo isku halaynta sheyga, waa inay si wanaagsan ugaga duwanaataa tartamayaasha, is waafaqaan oo la fahmi karaa. Midabada loo adeegsaday (buluug, caddaan iyo oranji) waxay abuuraan isbarbardhig, ku nuuxnuuxso waxyaabo muhiim ah oo ka tarjumaya meelaynta astaanta. Fikradda kaliya ee gaarka ah ee la soo saaray ayaa ka soocda taxanaha kuwa soosaarayaasha kale. Istaraatiijiyadda macluumaadka aragtida ayaa suurta gal ka dhigtay in la garto sheyga kaladuwan ee taxanaha ah, iyo adeegsiga sawirada halkii sawirada laga dhigi lahaa xirmooyinku ay sii xiiso badnaayeen.
Arbaco 15 Bisha Sagaalaad 2021
Laambad Giraanta Mobius waxay siisaa dhiirigelin ku saabsan nashqadeynta nalalka Mobius. Hal xariijin laambad ayaa lahaan kara labo sagxadood oo hooska ah (tusaale. Dusha laba-gees leh), dhinaca dambe iyo tan gadaasha, taasoo buuxin doonta baahida nalalka oo dhan. Qaabkeeda gaarka ah iyo midka fudud ayaa ka kooban qurux quruxsan oo xisaab ah. Sidaa darteed, qurux badan oo isku-habeyn ah ayaa loo keeni doonaa nolosha guriga.
Isniin 13 Bisha Sagaalaad 2021
Kursi Dib-U-Habeynta Shirkaddu Nashqadeynta Nooca Loo Yaqaan 'typeface Design' Laambada Hawsha Baakada Laambad